Redmi Rịba ama 8 dị n'ụzọ ya: ekwenyelarịrị 3C kwadoro ya | Gam akporosis
Dị ka TENAA, ndị ọrụ ụlọ ọrụ China 3C na-ewe ọtụtụ ekwentị iji nyochaa ha ma tinye akara nke aka ha. Nke a bụ ọrụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, maka ịdepụta nkọwa nke chaja nke ndị a, yabụ ọ na-ewekarị ozi gbasara teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa nke ngwaọrụ ndị a ga-arụ ọrụ, dị ka Ihe ngosi RedN 8.
Nke a mobile adịghị na nso ẹkedori ma; ọ gaghị abịarute nanị ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu ole na ole. Otú ọ dị, eziokwu na ọ ga-eme n'oge na-adịghị anya ịdị na ahịa na nso nso, a ga-egosikwa ya na ọnwa ole na ole sochirinụ; ikekwe tupu Jenụwarị 2020, ụbọchị kwekọrọ na mwepụta nke Ihe ngosi RedN 7.
Ebumnuche ọhụrụ abụọ apụtawo na ikpo okwu 3C. Otu n'ime ha nwere nkwado maka ngwa ngwa ngwa ngwa 18-watt, nke a kwuru na ọ ga-abụ smartphone Redmi Note 8 na-esote.
Akwụkwọ 3C nke Redmi Rịba ama 8 na Redmi Rịba ama 8 Pro
Ya mere, Ndi ikike 3C nke China ekwenyela na Xiaomi ekwenti amaghi na ihe di iche M1908C3IE na M1908C3IC.. Ndepụta ahụ na-ekpughe na ekwentị nwere ike ịkwado chaja MDY-09-EK, nke na-akwado naanị 5V / 2A (10W) na-akwụ ụgwọ. Enwere ike ịhụ nke a na njide nke ndepụta edepụtara n'elu nchekwa data nke ụlọ ọrụ na-achịkwa iwu.
Redmi Rịba ama 7 usoro gafere 5 nde ahịa na otu n'ime ndị kasị ibu ahịa
Ekwentị ọzọ nwere ụdị ụdị M1906G7E na M1906G7T. Asambodo 3C ya na-ekpughe na ọ nwere ike ibuga chaja MDY-10-EC nke na-akwado ngwa ngwa ngwa ngwa ruo 18W. Eleghị anya, ama a nwere ike ịbụ Redmi Note 8 ma ọ bụ Redmi Note 8 Pro. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ike na ọ bụ ngwaọrụ dị iche. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị ichere maka akụkọ ndị ọzọ iji gosipụta njirimara ziri ezi nke M1908C3IE / C na M1906G7E / T smartphones, mana asịrị na-egosipụtakarị ha dị ka smartphones ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi Rịba ama 8 dị n'ụzọ ya: ekwenyelarịrị 3C